September 2014 - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
ခဲ့သောရန်ဂျီဆန်သည်F.T Island ဂီတအဖွဲ့ဝင်လီဟုန်ကီး နဲ့တွဲဖက်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သော“တောသူမလေးချစ်ပုံပြင်ဇာတ်လမ်းတွဲ”ဖြင့်
ဖြေ။ ဇာတ်လမ်းတွဲစပြတဲ့အပိုင်း(၁)(၂)တွေကိုကျွန်မကြည့်တောင် မကြည့်ရဲခဲ့ဘူး။ကျွန်မနာဒိုရင်ကိုသရုပ်ဆောင်တုန်းကလည်းလီဟုန်ကီး ကဘေးကနေရယ်နေတာပါးစပ်တောင်မပိတ်နိုင်ဘူးလေ။မျက်နှာကိုလည်း
မေး။“တောသူမလေးချစ်ပုံပြင်”ဇာတ်လမ်းတွဲကိုနှစ်သက်တဲ့ပရိတ်သတ် တွေ အတွက်စကားလေးတစ်ခွန်းလောက်ပြောပေးပါအုံး။
ကောလဟလများကို ငြင်းပယ်လိုက်သည့် Ariana Grande
ကင်မရာရှေ့ တွင် ချစ်စဖွယ်မျက်နှာပေးများ ပေးကာ သီချင်းဆိုရာတွင် အသံမြင့်များဖြင့် သူမ၏အနုပညာကို ထုတ်ဖော်ပြတတ်သော အဆိုတော်မလေး Ariana Grande (၂၂ နှစ်) ၏နာမည်ကျော်ကြားသည်မှာ မကြာ သေးသော်လည်း နာမည်ဖျက်လိုသူများက သူမနှင့်ပတ်သက်သည့်ကောလဟလများကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ ရာယင်းအကြောင်းများမှာ မမှန်ကန်ကြောင်း စက်တင်ဘာ ၁၆ရက်တွင် Ariana Grande ကိုယ်တိုင်က ရှင်းလင်းခဲ့သည်။
လတ်တလောထွက်ရှိခဲ့သည့် Ariana Grande ၏ မကောင်းသတင်းတစ်ရပ်တွင် Ariana က Manhattan ရေဒီယိုဋ္ဌာနသို့ လည်ပတ်သွားရောက်ခဲ့စဉ်က ပရိသတ်များကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးချိန် ဓါတ်လှေကားအတွင်း ၌ရောက်သော် ပြုံးထားသောအပြုံးကိုဖျက်လျက် “အဲဒီပရိသတ်တွေအားလုံး ဆုံးသွားရင်ကောင်းမှာပဲ” ဟုပြောကြားခဲ့ကြောင်း အတွင်းလူတစ်ဦး ကပြောသည်ဟု New York သတင်းစာ၌ ဖော်ပြထားသည်။ သို့သော် Ariana ၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးက New York သတင်းစာကဖော်ပြသည်မှာ လုံးဝမှန်ကန်ခြင်းမရှိ ကြောင်း၊ Ariana က သူမ၏ပရိသတ်များကို ချစ်မြတ်နိုးကြောင်း Huffington Post ဆက်သွယ်၍ပြောပြခဲ့သည်။ အဆိုတော် Ariana က လည်းစက်တင်ဘာ ၁၆ရက်တွင် သူမ၏တွစ်တာစာမျက်နှာ၌ “ကျွန်မအ ကြောင်းလတ်တလောထွက်နေတဲ့ ကောလဟလတွေ ကိုဖတ်ပြီး ရယ်တောင်ရယ်မိပါတယ်။ ကျွန်မဒါတွေကို အရေးမစိုက်ပါဘူး” ဟုရေးသားခဲ့သည်။
The Way အဆိုတော် Ariana Grande သည် Problem သီချင်းတွင် ရပ်ပါ Big Sean နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ ချိန်မှစ၍ သူမနှင့် Big Sean တို့စုံတွဲဖြစ်နေသည်ဟု သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့သော်လည်း Ariana က ယင်းအ ကြောင်းကိုအတည် ပြုပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပေ။ သြဂုတ်လတွင်ကျင်းပခဲ့သည့် VMA ဆုပေးပွဲစင်နောက် ဘက်တွင်လည်း Big Sean နှင့် Ariana တို့လက်ချင်းကိုင်လျက်စကားပြော နေကြသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပြီး Big Sean က ၄င်းနှင့် Ariana တို့၏ စိတ်ခံစားချက်ဆက်နွယ်မှုခိုင်မာကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်။
ကြိုးကိုင်တတ်သော စူပါမားကက်များကို ကြိုးပြန်ကိုင်ခြင်း
စက် ၂၂၊ သမန်းကျား
သင် စူပါမားကက်မှာ ဈေးဝယ်ပါသလား။ စူပါမားကက်တစ်ခုထဲကို ၀င်ပြီးလှည့်ပတ်ကြည့်ရှုလိုက်မိပြီ ဆိုရင်ကိုပဲ လိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ဟောတစ်ခု၊ဟောတစ်ခုတွေ့ တာမျိုး ကြုံဖူးပါသလား။ စူပါမားကက်တွေဟာ ဈေးဝယ်သူကို သူတို့ ရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ မ၀ယ်၊၀ယ်အောင် ဥာဏ်ဆင်ပြီးဆွဲဆောင်ထားတယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား။
စူပါမားကက်တွေရဲ့ ဒီဝသီကို သတိထားမိတဲ့ နိုင်ငံတကာအစိုးရနဲ့အစားအစာနှင့်အာဟာရသုတေသီတွေဟာ စူပါ မားကက်တွေအနေနဲ့စားသုံးသူပြည်သူလူထုကို ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေဝယ်ဖို့ဆွဲဆောင် တာထက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကို ၀ယ်ချင်လာအောင် ဆွဲဆောင်စေဖို့ပြင်ဆင်မှုလေးတစ်ခုပဲ လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာရောင်းချမှုအပေါ်မှာ အခွန်အခ လျော့ပေါ့ သတ်မှတ်ပေးခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စူပါမားကက်တစ်ခုထဲကိုဝင်သွားလိုက်တဲ့အခါတိုင်း သင်ဟာကြိုးကိုင်ခံရပါတယ်။ ဥပမာ သင်အမှန်တစ်ကယ်လိုတဲ့ အခြေခံစားသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဟာ တခြားအရောင်အသွေးစုံလင်လှပမွေးကြိုင်နေတဲ့ မုန့် မျိုးစုံရဲ့ နောက်ခပ်လှမ်း လှမ်းနေရာမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ သတိထားကြည့်ပါ။ ကြက်ဥ၊နွားနို့ ၊ပေါင်မုန့် အစရှိတာတွေကိုနောက်ကထားပြီး မုန့် တွေ၊အထုပ်လှလှနဲ့ အာလူးကြော်တွေ၊ချိစ်အမျိုးမျိုးတွေကို ရှေ့ ကထားထားပါတယ်။ ဒီတော့ ပေါင်မုန့် ဝယ်ဖို့လာလိုက်တယ်ဆိုပေမယ့် သိပ်လှတဲ့အာလူးကြော်ထုပ်ကလေးကို အိမ်ကသားလေးအတွက် ၀ယ်မိသွားတာပါပဲ။
လူကြီးကိုဆွဲဆောင်လို့ အားမရသေးဘူး၊ ကလေးတွေကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ကလေးတွေရဲ့ မျက်လုံး အမြင့်နဲ့ တစ်တန်းတည်းကျတဲ့နေရာမှာ သူတို့ ရဲ့ အသည်းစွဲ ကာတွန်းပုံတွေပါတဲ့ မုန့် အမျိုးမျိုးကို လှလှပပလေး စီထားကြပါတယ်။ သင်ဈေးဝယ်လှည်းနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေချိန်မှာ ၃၆၀ ဒီဂရီလိုက်ကြည့်နေတဲ့ကလေးတွေဟာ အဲဒီ မုန့် တွေကိုတွေ့ ပြီး ပူဆာနေပါပြီ။
ဒါပေမယ့် ဒီလိုကြိုးကိုင်မှုတွေကို ကောင်းကျိုးအတွက်ကော သုံးလို့ မရနိုင်ဘူးလား။ ပျမ်းမျှစားသောက်ကုန်ထုတ် လုပ်သူတစ်ယောက်အနေနဲ့လူတွေကို အဆီ၊သကြား၊မဆလာအရသာကဲထားတဲ့ စားသောက်ကုန်တွေနဲ့ဆွဲ ဆောင်ဖို့ ပဲ ကြိုးစားမှာပါ။ စူပါမားကက်တွေသာ ညီညွှတ်ကြမယ်ဆိုရင် ဒီလိုကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွှတ်တဲ့ အစား အစာတွေကို လူတွေဝယ်ချင်အောင် ခင်းကျင်းပြသထားလို့ ရသလို မ၀ယ်ချင်အောင်ထားလိုက်လည်း ရပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ များ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေအပေါ် ရောင်းခွန်၊၀ယ်ခွန်လျော့ချပေးမယ်ဆိုရင် စူပါ မားကက်တွေကလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာနိုင်ပါတယ်။ အခင်းအကျင်း အထားအသိုကို ပြောင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက် အာလူးကြော်နဲ့ ချိစ်ကိတ်ပူဆာတတ်တဲ့ကလေးတွေဟာ အလိုလိုပဲ ပန်းမုန်လာကြော်စားချင်တယ်လို့ပြောလာကြမှာပါ။
အခုလက်ရှိစတိုးဆိုင်အချို့ မှာ လူတွေကိုကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကို ၀ယ်ယူဖို့ ဆွဲဆောင်ကြည့်တဲ့ အခါ သိပ်မခက်လှဘူးဆိုတာကို တွေ့ ခဲ့ကြပါတယ်။ စတိုးဆိုင်ရှေ့ အ၀င်ပေါက်ကနေ ‘Healthy’ ‘Low Calorie’ အစ ရှိတဲ့ စကားလုံးတွေကို ထင်ထင်ရှားရှားရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ ဟင်းချက်နည်းလမ်းညွှန်စာရွက်တွေ ဝေပေးတဲ့အခါ လူတွေ ဟာ အဲဒီဟင်းချက်နည်းလမ်းညွှန်ထဲပါတာတွေကို ဦးစားပေးဝယ်သွားကြပြီး မုန့် ပဲသွားရေစာဝယ်တာ နဲသွားတာကို တွေ့ ခဲ့ကြတာပါ။
လူတိုင်းကျန်းမာချင်ပါတယ်။ လူတိုင်းခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား မှန်ကန်လှပချင်ကြပါတယ်။ Healthy နဲ့Low Calorie ဆိုတာတွေ့ လိုက်ရင်ကိုပဲ မသိစိတ်ထဲကနေ အဲဒီစားသောက်ကုန်ကို အလိုလိုရွေးချယ်ကြတာပါ။ ခုနက ဟင်းချက် နည်းလမ်းညွှန်တွေကို Healthy နဲ့Low Calorie စာလုံးတွေမပါဘဲ ဝေကြည့်တော့ လူတွေရဲ့ ဈေးဝယ်ပုံဟာ အထွေအထူး ပြောင်းလဲမသွားဘဲ ခါတိုင်းလို မုန့် တွေ၊အချိုတွေ၊အငန်တွေကို ဦးစားပေးဝယ်သွားကြတာကို တွေ့ ရ ပါတယ်။
ထမင်းစားစားပွဲအလယ်မှာဖြစ်စေ၊ မြင်သာတဲ့နေရာမှာဖြစ်စေ အသီးအနှံပွဲကို လှလှပပလေး ပြင်ပြီးထားပါ။ အလယ် မှာ စာရွက်ကလေးတစ်ရွက်အပေါ် ‘ဒီအသီးအနှံတွေစားဖို့နေရာချန်ပါ’ လို့ ရေးပြထားလိုက်မယ်ဆိုရင် လူတွေဟာ ညစာကို ပုံမှန်စားတာထက် ၂၄ ရာခိုင်နှူန်းလောက် လျော့စားကြတာကို တွေ့ ရပါတယ်ဟု စားသုံးသူအမူအကျင့် ဆိုင်ရာ သုတေသီများက ပြောပါတယ်။
တစ်ခါ စူပါမားကက်တွေမှာ အသီးအနှံနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို တစ်ပိုင်း၊ အသား၊ငါး၊တွေကိုတစ်ပိုင်း ထားပြီး ဈေးနှူန်းကို မြင်သာအောင် ခွဲခြားဖော်ပြကြည့်ပါတယ်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေက တစ်ကီလိုကို ၁ ဒသမ ၈၂ ဒေါ် လာ ကျသင့်တဲ့အခါ အသား၊ငါးက ၅ ဒသမ ၁၉ ဒေါ်လာကျတယ်ဆိုတာကို ကွဲကွဲပြားပြားဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒီ ဈေးနှူန်းနှစ်ဆလောက်ကွာဟနေတာကို မြင်တဲ့ဈေးဝယ်သူအပေါင်းဟာ အသားကိုလျော့ဝယ်ပြီး ဟင်းသီးဟင်း ရွက် သစ်သီးဝလံတွေကိုပဲ ဦးစားပေးဝယ်သွားကြတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
Healthy ဆိုတဲ့စာလုံး ကပ်ပေးထားရင်ကိုပဲ အဲဒီအစားအစာကို အ၀ယ်လိုက်ပါတယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကို အရအမိ အသုံးချချင်ရင် တစ်ပါတ်ကို တစ်ရက်လောက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကို ပရိုမိုးရှင်းလုပ်တဲ့ အနေ နဲ့အထူးလျော့ဈေးနဲ့ ရောင်းပေးပါ။ လူတွေသောက်သောက်လဲ ၀ယ်ပါလိမ့်မယ်။ စူပါမားကက်ကလည်း ရောင်းအား တက်သလို စားသုံးသူပြည်သူလူထုလည်း ကျန်းမာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမှာပါ။
ညံဖျင်းသိမ်နုပ်တဲ့အစားအစာ တွေကို မလျော်တဲ့ကြော်ငြာနည်းတွေနဲ့ဥာဏ်ဆင်ဆွဲဆောင်ပြီး ငွေမျက်နှာတစ်ခုတည်းကြည့်ပြီး ရောင်းတာမျိုးက တော့ အခန့် မသင့်ရင် ဥပဒေရဲ့ဒဏ်ခတ်မှုကိုတောင် ခံရနိုင်ပါတယ်လို့အစာအာဟာရပညာရှင်တစ်ဦးက ပြောပါ တယ်။
လူတွေဟာ ဗယ်ဘက်ကိုအရင်ကြည့်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သောက်ရေသန့် ကို ဗယ်ဖက်ခြမ်း၊ မျက်လုံးနဲ့ တစ်တန်း တည်းနေရာမှာထားပေးပြီး ဘေးနားမှာဖြစ်စေ၊ သူ့ အောက်ကပ်လျက်မှာဖြစ်စေ ကယ်လိုရီနဲတဲ့ မလိုင်လွတ်နွားနို့ ၊ ပဲနို့အစရှိတာတွေကိုထားရင် လူတွေပိုဝယ်ကြပါတာကို တွေ့ ရပါတယ်။
အရောင်ကလည်း လူတွေရဲ့ စိတ်ကိုစိုးမိုးပါတယ်။ မီးပွိုင့်ကနေပဲ စလိုက်ရအောင်။ အနီရောင်ကိုကြောက်တဲ့စိတ် လူတိုင်းမှာရှိပါတယ်။ အစိမ်းရောင်ကိုတော့ နှစ်သက်ကြပြီး အ၀ါရောင်ဆိုရင် သတိထားကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေကို အစိမ်းရောင်စင်မြင့်၊အစိမ်းရောင်ကြော်ငြာ၊ အစိမ်းရောင်စက္ကူ အစ ရှိသဖြင့် အစိမ်းများများသုံးပေးရင် လူတွေပိုဝယ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ အစားအစာတွေကို တော့ အနီရောင်များများနဲ့ခင်းကျင်းရောင်းချပေးခြင်းဖြင့် လွယ်လင့်တကူထိန်းချုပ်နိုင်တာကို တွေ့ ရပါတယ်။ ဂရုပြုစား ရမယ့် အစားအစာတွေကိုတော့ အ၀ါရောင်သုံးပေါ့လို့နောက်ထပ်သုတေသီတစ်ဦးက ပြောပြပါတယ်။
နိုင်ငံတကာမှာတော့ အများပြည်သူကျန်းမာရေးအတွက် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အဖွဲ့ အစည်းကလည်း ဂရုတစိုက် လုပ်ကြသလို လူတစ်ယောက်ချင်းစီကလည်း ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ ထိန်းကြပါတယ်။
စူပါမားကက်တွေကို အစိုးရက ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစားအသောက်တွေအပေါ် အခွန်အခလျော့ချပေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း ဒီအစားအစာတွေကို ပိုရောင်းရလာအောင် စူပါမားကက်တွေက ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်း ကျွမ်းကျင်တဲ့သုတေသီတွေနဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီး အခင်းအကျင်းအရောင်အဆင်းတွေကို ပြုပြင်ရောင်းချလာတဲ့အတွက် အခုလည် စူပါမားကက်ထဲကိုဝင်တိုင်း သင် ဟာ ဥာဏ်ဆင်ပြီးဆွဲဆောင်တာကို ခံနေရတုန်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီတစ်ခါတော့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစား အစာတွေကို ၀ယ်ဖို့ဆွဲဆောင်ခံရတာမို့မနစ်နာပါဘူးလို့လေ့လာရေးသားတင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
နယ်လှည့်၍ ဆိုင်ကယ် ခိုးယူသူများအား ဖမ်းဆီးရမိ
မုံရွာ စက်တင်ဘာ ၂၃
စစ်ကိုင်းတိုင်း ဒေသကြီး မုံရွာမြို့၌ နယ်လှည့်၍ ဆိုင်ကယ်ခိုးယူသူ ခုနစ်ဦးနှင့် ခိုးရာပါ ဆိုင်ကယ် ၃၄ စီးကို စက်တင်ဘာ ၇ ရက်မှစတင်၍ မုံရွာမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက ပူးပေါင်းဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့ကြောင်း စစ်ကိုင်း တိုင်း ဒေသကြီး အစိုးရရုံးအဖွဲ့ နယ်စပ်ရေးရာနှင့် လုံခြုံရေး ဝန်ကြီးဌာနရုံးမှ သိရသည်။
သြဂုတ် နောက်ဆုံးပတ်တွင် မုံရွာမြို့ပေါ်၌ ဆိုင်ကယ် ခိုးယူခံရသည့် ဖြစ်စဉ်များ နေ့စဉ်နီးပါး ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အချို့သော ဆိုင်ကယ်ပိုင်ရှင်များသည် ဆိုင်ကယ်ခိုးယူ ခံရသော်လည်း ယင်းဆိုင်ကယ်မှာ လိုင်စင် (ယာဉ်မှတ်ပုံတင်) ပြုလုပ်ထားခြင်း မရှိသည့် အတွက် ရဲစခန်းများသို့ တိုင်တန်းအကြောင်း ကြားရန် ပျက်ကွက်ခဲ့သူများ ရှိခဲ့ကြောင်း မုံရွာ မြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုတိယရဲမှူး ကျော်ကျော်ညွန့်က ပြောသည်။
မုံရွာမြို့ပေါ်၌ ပျောက်ဆုံး ဆိုင်ကယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ စက်တင်ဘာ ၇ ရက်မှ စတင်ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီးခဲ့ရာ ဆိုင်ကယ် ခိုးယူသူဟု သံသယရှိသူ ခုနစ်ဦးနှင့် ထိုသူတို့၏ ဖော်ပြချက်များအရ ခိုးရာပါ ဆိုင်ကယ် ၃၄ စီးတို့ကို အချိန်တို အတွင်း ဖော်ထုတ် ဖမ်းဆီး နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ခိုးရာပါ ဆိုင်ကယ်များကို မုံရွာမြို့မ ရဲစခန်းနှင့် မုံရွာနယ်မြေ ရဲစခန်းများ၌ ကုန်းလမ်းသယ်ယူ ပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာန( ယာဉ်မှတ်ပုံတင်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဌာန) တို့အဖွဲ့မှ ပူးပေါင်း၍ အင်ဂျင်နံပါတ်၊ ယာဉ်ကိုယ်ထည် နံပါတ်များကို စိစစ်လျက် ရှိကြောင်း သိရသည်။
မိချောင်းဆွဲခံရသူ မိချောင်းမျက်လုံးကို လက်နဲ့ထိုးပြီး လွတ်မြောက်...
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့က သြစတေးလျမှာ အမဲလိုက်ထွက်ခဲ့တဲ့ အသက် ၂၀ အရွယ်
စတီဗင်မော်ရင်းဟာ သူ ပစ်ချလိုက်တဲ့ ငန်းတွေ ရေထဲကျသွားတာကို ဆင်းဆယ်တုန်း ၆ ပေကျော်ရှိတဲ့ မိချောင်းတကောင်က သူ့ လက်မောင်းကို ကိုက်ဆွဲပြီး ရေထဲဆွဲချသွားပါတယ်။ ရေအောက်အရောက်မှာ သူက သတိရှိရှိနဲ့ မိချောင်းရဲ့ မျက်လုံးထဲကို လက်နဲ့ထိုးထည့်တော့မှ လွှတ်ပေးလိုက်လို့ ကမ်းပေါ်ပြန်တက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူနဲ့အတူပါလာတဲ့ အဖော်က မိချောင်းကို သေနတ်နဲ့ ပစ်သတ်ခဲ့ပါတယ်။ သူ့မှာ ပေါက်ပြဲပွန်းပဲ့တဲ့ ဒဏ်ရာတွေ လောက်ပဲ ရခဲ့ပြီး အဲဒီအချိန်က ဘီယာအရှိန်နဲ့ အနာကို သိတ်မသိခဲ့ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာ့ရိုးရာလက်ဝှေ့ စိန်ခေါ်ပွဲ ထွန်းထွန်းမင်းက စောငမန်းကိုအလဲထိုး
မြန်မာနိုင်ငံ ရိုးရာလက်ဝှေ့အဖွဲ့ချုပ်ကကြီးမှူးပြီး H&S Group က စီစဉ်သော မြန်မာ့ရိုးရာ လက်ဝှေ့စိန်ခေါ်ပွဲကြီးကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီက ရန်ကုန်မြို့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် သိမ်ဖြူအားကစားခန်းမ၌ ကျင်းပရာ လက်ဝှေ့ဝါသနာရှင်များ ခန်းမပြည့်ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့ကြသည်။ ရှေးဦးစွာ သုံးချီစိန်ခေါ်ပွဲတွင် မင်းနိုင်ထွန်း(စွမ်းကေကေ)နှင့် ခွန်ရှိုင်းထက် (အဖြူရောင်သွေးသစ်)တို့ ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်ကြရာ သရေပွဲဖြစ် ခဲ့သည်။ လေးချီစိန်ခေါ်ပွဲတွင် စောဖြိုးဝေ (အဖြူရောင်သွေးသစ်) နှင့် ရဲသွေးနီ (တောင်ကလေး)ပွဲတွင် ရဲသွေးနီက ဒုတိယအချီ ၂မိနစ် ၄၁ စက္ကန့်၌ စောဖြိုးဝေကို အလဲထိုး အနိုင်ရရှိသွားသည်။
တစ်ဖန် ငါးချီစိန်ခေါ်ပွဲများတွင် ထွန်းနိုင်ဦး (အဖြူရောင်သွေးသစ်) နှင့် မြင့်အောင်(မုဒုံသား)တို့ပွဲ၌ ထွန်းနိုင်ဦးက စတုတ္ထအချီ ၁၆ စက္ကန့် ၌ မြင့်အောင်ကို အလဲထိုးအနိုင် ရရှိသွားသည်။ ဖြူလေး(မုဒုံသား) နှင့် ရှမ်းလေး(ဝါဆို)တို့ပွဲတွင်လည်း ရှမ်းလေးက ဖြူလေးကို ဒုတိယ အချီတွင် အလဲထိုးအနိုင်ရရှိသည်။
စောသဲဦး(T&T)နှင့် မိုးဟိန်း (မိကသီ) တို့ပွဲတွင် ပဉ္စမအချီ ၂ မိနစ် ၅၉ စက္ကန့်၌ မိုးဟိန်းက အလဲထိုး အနိုင်ရရှိသွားသည်။ စောအယ်လေး (ထောမဲ့ပါ)နှင့် သားအသဲတစ်ပွင့် (စွမ်းကေကေ၊ မန္တလေး) တို့ပွဲတွင် စောအယ်လေး ညာခြေကန်ချက်ကြောင့် ဒုတိယအချီ ၁ မိနစ် ၅၂ စက္ကန့်တွင် သားအသဲ တစ်ပွင့်အနား တောင်းကာ အရှုံးပေးလိုက်ရပြီး စောအယ်လေး အလဲထိုး အနိုင်ရရှိ သွားသည်။ ထက်အောင်ဦး (တောင် ကလေး)နှင့် ကျားပေါက်(ရွှေသောင်းရင်း မြဝတီ)တို့ပွဲ၌ ဒုတိယအချီ နှင့် စတုတ္ထအချီတွင် ကျားပေါက်က ထက်အောင်ဦးကို အနီးကပ် ထိုးခဲ့သော်လည်း ထက်အောင်ဦး ညာဒူး တိုက်ချက်ကြောင့် စတုတ္ထအချီ၌ ကျားပေါက် အနားတောင်းခံရကာ ဆက်လက် မယှဉ်ပြိုင်နိုင်၍ ထက်အောင်ဦး အလဲထိုးအနိုင်ရရှိကာ ပရိသတ်အကြိုက် ပွဲကောင်း တစ်ပွဲ ဖြစ်သည်။
ဖိုးကေ (မန္တလေး)နှင့် စောရန် ပိုင်(မိကသီ၊ ဘားအံ)တို့ပွဲမှာလည်း အရှုံးအနိုင်မပေါ်ဘဲ ပူးတွဲသရေ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒဂုံရွှေအောင်လံ လေးထပ်ကွမ်း စောငမန်း(ရွှေဖူး)နှင့် (၂၇)ကြိမ်မြောက် ဆီးဂိမ်းရွှေတံဆိပ်ဆုရှင် ထွန်းထွန်းမင်း(မုဒုံသား) တို့ပွဲ ပထမအချီ၌ ထွန်းထွန်းမင်း၏ ပြင်းထန်လှသော လက်သီး၊ ခေါင်း တိုက်ချက်ကြောင့် ၅၆ စက္ကန့်တွင် စောငမန်း အနားတောင်းခဲ့ရသည်။ ပထမအချီ၌ပင် စောငမန်းခေါင်း တိုက်ချက်ကြောင့် ထွန်းထွန်းမင်း မျက်ခုံးကွဲကာ ပထမအချီပြီးဆုံး ခဲ့သည်။ ဒုတိယအချီနှင့် တတိယ အချီတွင် ထွန်းထွန်းမင်း အသာစီး ထိုးခဲ့သော်လည်း စောငမန်း၏ လက်ဝှေ့သမ္ဘာကြောင့် တတိယအချီ ပြီးခဲ့ကာ စတုတ္ထအချီ ၁ မိနစ် ၁၅ စက္ကန့်၌ ထွန်းထွန်းမင်း၏ ဒူး၊ ခေါင်း တိုက်ချက်ကြောင့် စောငမန်း မယှဉ်ပြိုင်နိုင်၍ ထွန်းထွန်းမင်းက စောငမန်းကို အလဲထိုးအနိုင်ရရှိ သွားသည်။
ချိုင်းချွေးနံ့ ပျောက်ဆေးတွင် ပါဝင်သော Toxins သည် ခန္ဓာ ကိုယ်အတွင်း ဝင်ရောက်ပြီး ကင် ဆာဖြစ်စေနိုင်သည်။ ၎င်း Toxins သည် ချိုင်းမွေးရိတ်ရာတွင် အရေပြားပေါက်ပြဲကာတစ်ဆင့်သွေးထဲသို့ လျင်မြန်စွာ ဝင်ရာက်နိုင်သည်ဟု ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်ထုတ် Europern Journal of Cancer Prevention တွင် ချိုင်းချွေးနံ့ပျောက်ဆေး အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများမှာ ကင်ဆာ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြောင်း ပြောထားသည်ကို တွေ့ရသည်။
ရင်သားတစ်သျှူး အများစုသည် ရင်ဘတ် အပေါ်ပိုင်းတွင် ပိုမိုရှိသကဲ့သို့ ယင်းချိုင်းချွေးနံ့ပျောက် ဆေးအသုံးပြုသည့် နေရာမှာလည်း ရင်သားအပေါ် အပြင်ဘက်အပိုင်းတွင် ဖြစ်သောကြောင့် အမေရိကန် ကင်ဆာအဖွဲ့ (Ame-rican Cancer Society) က ရင်သားအပေါ် အပြင်ဘက် အပိုင်းတွင် ဖြစ်ပွားသော ရင်သားကင်ဆာ၏ အချိုးအစားနှင့် တူညီကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၌ ရင်သား ကင်ဆာဖြစ်ပွားသူ အမျိုးသမီးများနှင့် ကင်ဆာ မဖြစ်ပွားသော အမျိုးသမီးဦးရေ ၁၆ဝဝ ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါက ချိုင်းမွေးရိတ်ခြင်းနှင့် ချွေးနံ့ပျောက်ဆေး သုံးသူတို့သည် ရင်သားကင်ဆာနှင့် ဆက်စပ်မှုမ ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရသော်လည်း ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်တွင် တွေ့ရှိချက်များအရ ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနေသော အမျိုးသမီးငယ်များသည် ချိုင်းမွေး မကြာခဏ ရိတ်ခြင်းနှင့်အတူ ချိုင်းနံ့ ပျောက်ဆေးများကို ငယ်စဉ်ကတည်းက စတင်အသုံးပြုသူများ ဖြစ်ပါက ရင်သားကင်ဆာနှင့် ဆက်စပ်နေကြောင်း ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
ရင်သားကင်ဆာသည် အမျိုးသမီးများအတွက် အကြီးမားဆုံး ပြဿနာဖြစ်ပြီး ရင်သားကင်ဆာ မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ် တားဆီးနိုင်သော အရာများလည်း ရှိသည်။ သို့သော် အနံ့အသက်ပျောက်ဆေး မသုံးစွဲခြင်းဖြင့် ရင်သား ကင်ဆာဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို တားဆီး ပေးနိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
လားရှိုးမြို့ ၌ ၀က်မကြီးမှ ဆင်သဏ္ဍန်နှင့် မျောက်မျက်နှာ ၀က်နှစ်ကောင်မွေးဖွား
လားရှိုး၊ စက် (၂၀) စံရွှေဘို
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့ ၌ ဒီဇင်ဘာ ၂၀ရက် ညနေ ၅း၃၀ မှ ၆း၀၀ နာရီအတွင်း ရပ်ကွက် ၁၂ နယ်မြေ ၁၂ နှင်းဆီလမ်းအိမ်အမှတ် (၁၂/၂၄၇) အိမ်ရှင်ဒေါ်အေးနန်း၏ နေမိမ်၌၀က်မကြီးမှ ၀က်၅ကောင် မွေးဖွားရာမှ ဆင်နှင့်တူသော ၀က်တစ်ကောင်နှင့် မျောက်နှင့်တူပြီး လျှင်နှစ်ခွပါဝက်နှစ်ကောင် မွေးဖွား ခဲ့သည်ကို သိရှိရ၍ အိမ်ရှင်ဝက်ပိုင်ရှင်နှင့် သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
၀က်ပိုင်ရှင်မှာ ခရီးထွက်နေသဖြင့် တူမဖြစ်သူ မလှလှဖြိုးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာ ၀က်မှာပထမဦးဆုံး ၂ကောင်မွေးဖွားခဲ့ပြီး ၃နာရီလောက် အကြာ အချင်းထွက်လာပြီး အကောင်ပေါက်မရှိတော့ဘူးထင်မိရာ နောက်ထပ် ၁နာရီအကြာမှာ ဆင်ပုံသဏ္ဍန်ဝက် ထွက်လာပြီး နောက်တစ်ခါ လျှာနှစ်ခွနှင့် မျောက်မျက်နှာပုံပါဝက်ထွက်လာတယ်၊ စုစုပေါင်း(၅)ကောင် မွေးပြီး နှာမောင်းပါဆင်နှင့် တူသောဝက်က အသေလေးမွေးပါတယ်။ မျောက် နဲ့တူတဲ့ လျှာနှစ်ခွနဲ့ဝက်ကတော့ အရှင်လေးမွေးတာပါ နှာခေါင်းပေါက်မပါပါဘူး။ ဒါကြောင့် နို့ဘူးနဲ့နို့ မှုန့်ဖျော်ပြီး တိုက်နေရပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး က လျှာနှစ်ခွနဲ့ မျောက်လိုလို ကြံ့လိုဝက်မွေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ၀က်လေးတစ်ကောင် မွေးပါတယ်။ တတိယ ကျမှ နှာမောင်းပါပြီးဆင်နဲ့တူတဲ့ ၀က်လေးအသေမွေးပါတယ်။ နောက်ကျမှ ၀က်နှစ်ကောင်ထပ်မွေးတာပါ။ ကျန်တဲ့ဝက်တွေကတော့ သန်သန်မာမာပါဘဲ။ ဒီဝက်က ခရီးထွက်နေတဲ့ အဒေါ်ပိုင်တဲ့ဝက်ပါ။ အဒေါ်ခရီးထွက် နေတုန်း ကျမက ထိန်းကျောင်းပေးရင်း ဒီနေ့မှာ မွေးဖွားလာတာပါဟု ၀က်ပိုင်ရှင် ဒေါ်ခင်သန်းအေး၏ တူမ မလှလှဖြိုးမှ ပြောပြပါသည်။
မှန်ပါသည် သတင်းကြားကြားချင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ သွားရောက်ရိုက်ကူးရာ ဆင်နှင့် အသေမွေးဖွားလာသော ၀က်ကလေးမှာ နားရွက်၊ ခြေထောက်၊ ကိုယ်လုံး ဆင်ဦးခေါင်းပုံသဏ္ဍန်၊ အမြီးနှာမောင်းများပါရှိပြီး မျက်လုံး တစ်လုံး မှာ ပါးစပ်ထဲမှထွက်နေပြီး ဆင်ကိုယ်လုံးဆင်ခြေထောက်၊ ဆင်အမြီးများနှင့် တွေ့ရပြီး နောက်ဝက် အရှင်ကလေးတစ်ကောင်က နှခေါင်းမပါဘဲ လျှာနှစ်ခွ၊ မျောက်မျက်နှာပုံသဏ္ဍန်မွေးဖွားခဲ့သည်ကို မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံရိုက်ခဲ့ရပါသည်။ ၀က်မကြီးမှာ ၁နှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ထူးဆန်းအံ့သြဖွယ်ရာ ၀က်ကလေးများ အားမွေးဖွားခြင်းအတွက် လာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်ပေါင်းများစွာနှင့် စီကားလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
''ဟက်ပီး'' ဗီဒီယို အီရန် ကချေသည်များကို ကြိမ်ဒဏ်၊ ထောင်ဒဏ် အပြစ်ပေး
တီဟီရန် စက်တင်ဘာ ၁၉
ဖာရဲလ် ဝီလီယံ၏ ''ဟက်ပီး''သီချင်း ဗီဒီယိုရိုက်ကူးရာတွင် ပါဝင်ကခဲ့ကြသော အီရန်နိုင်ငံသားခြောက်ဦးကို ကြိမ်ဒဏ် ၉၁ ချက်နှင့် ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိအပြစ်ပေးလိုက်ကြောင်း ၎င်းတို့၏ ရှေ့နေက ယနေ့ပြောကြားသည်။
အဆိုပါ အရေးယူမှုများမှာ သုံးနှစ်ဆိုင်းငံ့ ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ရာ ၎င်းတို့က ထပ်မံ၍ ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမရှိခဲ့လျှင် ထောင်ဒဏ်ကျခံရမည်မဟုတ်ဟု အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ကြောင်း ၎င်းရှေ့နေက ဆိုသည်။
ယင်းဗီဒီယို ပြကွက်တွင် အမျိုးသားသုံးဦးနှင့်မျက်နှာဖော်ထားသော အမျိုးသမီး သုံးဦးတို့သည် တီဟီရန်မြို့ အဆောက်အအုံများ၏ ခေါင်မိုးများပေါ်နှင့် လမ်းများပေါ်တွင် ကခုန်နေကြသည်ကို ပြသထားသည်။ ခြောက်လအတွင်း ယူကျုပေါ်၌ ၎င်းဗီဒီယိုကို လူတစ်သန်းကျော် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြသည်။
ဗီဒီယို၌ ပါဝင်သူအများစုကို ထောင်ဒဏ်ခြောက်လစီ ကျခံရန် အပြစ်ပေးပြီး တစ်ဦးကိုမူ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ်အထိ အပြစ်ပေးကြောင်း ရှေ့နေ ဖာရှစ်ရိုဖူဂါရန်၏ ပြောကြားချက်ကို အီရန်သတင်းဌာနက ကိုးကားဖော်ပြသည်။ ရှုထောင့်အမြင်ပေါင်း ၁၅ဝဝဝဝ ကျော် လက်ခံရရှိပြီးနောက် အီရန်အာဏာပိုင်များက ''ဟက်ပီးဝီအာဖရောင်တီဟီရန်'' ဗီဒီယိုကို အာရုံရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
နိုင်ငံကပြဋ္ဌာန်းထားသော အမျိုးသမီးများ ခေါင်းစီးပဝါ မစည်းခြင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် လိင်များနှင့်အတူ ရောနှောကခြင်းတို့ကို တားမြစ်သည့် အစ္စလာမ္မစ် ဥပဒေကို ချိုးဖောက်သည့် စွပ်စွဲချက်ဖြင့် ဗီဒီယိုရိုက်ကူးသောအုပ်စုမှ အဖွဲ့ဝင်များကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဝီလီယံသည် အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ပြီး ရက်ပ်ပါာအဆိုတော်၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ ဂီတမှူး၊ ဓာတ်ပြားထုတ်လုပ်သူ၊ ဒီဇိုင်နာတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ယူကေတွင် သကြားစားသုံးမှုလျော့ချရန် အမျိုးသားရေးအဖြစ် လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မည်
ကျန်းမာရေး၊ စက် (၁၇)
သကြားစားသုံးမှု လွန်ကဲခြင်းကြောင်း ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေး ထိခိုက်မှုနှင့် သွားပျက်စီးမှုတို့ ကြောင့် လူထုအနေနှင့် ကျန်းမာရေး ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ကုန်ကျစရိတ်တိုးမြင့်လာခြင်းတို့ပိုမိုများပြားလာသည့်အတွက် လူ တစ်ဦးခြင်း သကြားစားသုံးသည့်နှူန်းကို ယခင်ကထက်ပို၍လျော့ချသွားရန် အင်္ဂလန်အစိုးရအဖွဲ့ ၊ ကျန်းမာရေး အကြံပေးများက တင်ပြခဲ့ရာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ ကလည်း ထောက်ခံချက်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခင်က လူတစ်ဦးခြင်းစားသုံးသော အစာအာဟာရမှရရှိသည့် ခွန်အား၏ (၁၀) ရာခိုင်နှူန်းနှင့်ညီမျှသော သကြား ဓါတ်ကိုစားသုံးရန်သင့်လျော်သည်ဟုဆိုခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ (၅) ရာခိုင်နှူန်းအထိ လျော့ချရန်လိုအပ်ကြောင်း ကျန်းမာရေးသုတေသီများက အကြံပြုရာဝယ် ယူနီဗာစီတီကောလိပ်လန်ဒန်နှင့် လန်ဒန်ဆေးတက္ကသိုလ်သုတေသီ တို့ က သကြားစားသုံးမှုနှူန်းကို (၃) ရာခိုင်နှူန်းအထိ လျော့ချရန်လိုအပ်ကြောင်း ပြောသည်။
သွားနဲ့ ခံတွင်းရောဂါကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင် သကြားစားသုံးမှုလွန်ကဲခြင်းဟာ အဓိကအကျဆုံးအကြောင်းရင်း တစ်ခုဖြစ်နေတာကို တွေ့ ရမှာပါ။ သကြားစားသုံးမှုလျော့ချလိုက်ရုံနဲ့အလွယ်တကူကြိုတင်ကာကွယ်လို့ ရတဲ့ သွား
နဲ့ ခံတွင်းပျက်စီးမှု၊ ဆေးကုသစရိတ်နဲ့တစ်ခြား လူမှုစီးပွားအခက်အခဲအတော်များများကို လျော့ချသွားနိုင်မှာပါဟု သုတေသီတစ်ဦးက ပြောသည်။
ယူကေတွင် သကြားစားသုံးမှု ၅ ရာခိုင်နှူန်းခန့် ရှိသောကလေးငယ်များတွင် သွားနှင့်ခံတွင်းပျက်စီးမှုများပြားနေ သည့်အတွက် ကုန်ကျသည့်ဆေးကုစရိတ်မှာလည်း နိုင်ငံတ၀ှမ်းလုံး၏ ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်တစ်ခုလုံး၏ ၅ ရာခိုင်နှူန်းမှ ၁၀ ရာခိုင်နှူန်းအထိ ရှိနေသည်။ ထို့ ကြောင်း သကြားစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရန် ကလေးငယ်အများစု နှင့်ပါတ်သက်နေသည့် ကျောင်း၊ ဆေးရုံများတွင် မုန့် နှင့်အချိုရည်များရောင်းချသော ဆိုင်၊ စက် အစရှိသည်တို့ ကို အစိုးရကတိုက်ရိုက်ကိုင်တွယ်ထိန်းချုပ်ပြီး အစားအသောက်တွင် သကြားပါဝင်မှု ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင်နှူန်းထက်ပိုလျင် သကြားခွန်ဆောင်စေရန် အစိုးရအကြံပေးများက တင်ပြထားသည်။
ကလေးတွေတင်မက လူကြီးတွေကပါ သကြားကို ၁၀ ရာခိုင်နှူန်းထက်ပိုပြီးမစားဖို့ ဆိုတာကို တိတိကျကျမလိုက်နာ နိုင်ကြပါဘူး။ ဒါကိုချက်ခြင်းပဲ ပြောင်းလဲသွားအောင်လုပ်ဖို့ တော့ ခက်ပါတယ်။ ဒီတော့ သကြားစားသုံးမှုကို ၁၀ ရာ ခိုင်နှူန်းကနေ ၅ ရာခိုင်နှူန်းအထိလျော့ချသွားနိုင်ဖို့အမျိုးသားရေးတစ်ရပ်အနေနဲ့လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်သွားပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ၃ ရာခိုင်နှူန်းအထိ လျော့ချသွားဖို့ဆက်ကြိုးစားသွားပါမယ်ဟု လန်ဒန်ဆေးတက္ကသိုလ်မှ ပရော်ဖက် ဆာ ဒေါက်တာ ဂျိမ်းကပြောသည်။
မိမိနေ့ စဉ်စားသုံးသော သကြားပမာဏသည် စုစုပေါင်းအစားအစာမှရရှိသောအာဟာရ၏ ၅ ရာခိုင်နှူန်းဖြစ်စေရန် အမျိုးသမီးများက လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၅ ဇွန်းမှ ၆ ဇွန်း၊ အမျိုးသားများက ၇ ဇွန်းမှ ၈ ဇွန်းအထိ စားသောက်နိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မျက်စိသုံးလုံးပါ ရှားပါးနွားပေါက် တစ်ကောင် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် မွေးဖွား
တမီးလ်နာဒူ ၊ ၁၈-၉-၂၀၁၄
အိန္ဒိယနိုင်ငံ တောင်ပိုင်း တမီးလ်နာဒူ ပြည်နယ် အတွင်းရှိ ကိုလာသာ ကျေးရွာ တွင် မျက်စိသုံးလုံး ပါရှိသည့် ရှားပါး နွားပေါက် တစ်ကောင် မွေးဖွား ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ နွားပေါက်သည် သာမန် နွားပေါက်များနှင့် မတူဘဲ နဖူး တည့်တည့်တွင်မျက်စိတစ်လုံး အပိုပါရှိ၍ မွေးဖွား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထူးဆန်းစွာ မွေးဖွားလာသည့် အဆိုပါ နွားပေါက်ကို ဒေသခံများက မျက်စိ သုံးလုံး ပါသည့် Shiva နတ်ဘုရား ဝင်စားသည်ဟု ယုံကြည်ထား ကြကြောင်း သိရသည်။
မျက်စိသုံးလုံးပါ နွားပေါက်လေး မွေးဖွား ခဲ့ခြင်းသည် အလွန် အံ့အားသင့်ဖွယ် ကောင်းပြီး ကျေးရွာအတွက် ကံကောင်းခြင်း နိမိတ် လက္ခဏာ ဖြစ်သည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း၊ အဆိုပါ နွားပေါက် ကလေးကို တိုင်တည်၍ ဆုတောင်းပါက မိမိတို့၏ ဆုတောင်းများ ပြည့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် မိမိတို့ ဒေသခံများ အနေဖြင့် အဆိုပါ နွားပေါက်ကို နတ်ဘုရား တစ်ပါးကဲ့သို့ သဘောထား၍ ဂါရ၀ပြု ဆုတောင်းမှုများ ပြုလုပ် နေကြောင်း ၊ အနီးအနားရှိ ကျေးရွာများမှ ဒေသခံ များကလည်း အဆိုပါ နွားပေါက်ကို လာရောက် ဂါရ၀ပြု ဆုတောင်း ကြကြောင်း နွားပေါက် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ ရာဂျက် က ပြောကြားသည်။
မျက်စိသုံးလုံး ပါရှိသည့် Shiva နတ်ဘုရားသည် ဟိန္ဒူ ဘာသာဝင်များ အပေါ် လွှမ်းမိုးမှု အရှိဆုံး နတ်ဘုရားများ အနက် တစ်ပါး အပါအ၀င် ဖြစ်ပြီး Shiva နတ်ဘုရား ဒေါသထွက်၍ ၄င်း၏ တတိယ မျက်လုံးဖြင့် အရာဝတ္ထု များကို ကြည့်ရှုပါက ၄င်း အရာဝတ္ထု များမှာ မီးလောင်ကျွမ်း၍ ပြာမှုန့်များ ဖြစ်သွားသည် အထိ အစွမ်းရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
Contraceptive implant ကိုယ်ဝန်တားအရေပြားအောက် ထားရတဲ့ပစ္စည်း
1. ဆရာ သမီးအသက် ၂၂နှစ်ပါ။ လက်မောင်းထဲထည့်သန္ဓေတားနည်းအကြောင်းလေးသိချင်လို့ပါ။ တစ်ချို့ကပြောပါတယ်။ အဲ့ပစ္စည်းထည့်ပြီးရင် ထည့်ထားတဲ့နေရာက ယားနေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဘာဖြစ်တာလဲသိချင်လို့ပါ။ သူ့ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလေးလဲသိချင်လို့ပါ။
2. ဆရာ လက်မောင်းထဲမှာ အပ်မြှုပ်ပြီး သားဆက်ခြား၊ သန္ဓေတားတဲ့အကြောင်း ပြည့်ပြည့် စုံစုံ သိချင်ပါရစေရှင်။ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါရှင်။ လေးစားစွာဖြင့် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ရှင်။
ဆံညှပ်အရွယ်၊ ကွေးနိုင်ဆန့်နိုင်တဲ့ ပြွန်ချောင်းကလေးတခု ဖြစ်တယ်။ လက်မောင်းအတွင်းဖက် အရေပြားအောက်မှာ ထုံဆေး-ပိုးသန့်ဆေး သုံးပြီးထည့်ထားရတယ်။ သူကနေ Progestogen ဟော်မုန်းကို ၃ နှစ်ကြာအောင် ထုတ်ပေးနေမယ်။ ဟော်မုန်းကနေ လစဉ် မ-မျိုးဥအိမ်ကနေမ-မျိုးဥမထွက်စေအောင် တားဆီးပေးတယ်။ သားအိမ်အဝရှိတဲ့ ချွဲကျိတဲ့ အရည်ကိုလဲ ပြစ်စေးလာစေလို့ ကျားသုက်ပိုးကိုသားအိမ်ထဲမဝင်စေအောင် ထားမယ်။ သားအိမ် အတွင်းသား နံရံကိုလဲ ပါးလွှာစေလို့ သန္ခေတွယ်ကပ်မှာကိုလည်း တားဆီးပေးမယ်။ ၉၉% မကထိရောက်တယ်။ လစဉ်ရာသီလာအပြီး ၅ ရက်မြောက်နေ့ကစ ထည့်ထားရင် ချက်ချင်းထိရောက်တယ်။ အဲဒီအချိန်မှာကိုယ်ဝန်ရှိမနေစရေဘူး။ ကလေးဖွါးပြီးစမှာလဲ ထည့်နိုင်တယ်။ သားပျက်ပြီးစလဲထည့်နိုင်တယ်။ ကလေးနို့တိုက်တာကိုလဲသက်ရောက်မှုမပြု။ ရာသီမလာမီ လက္ခဏာတွေကိုလဲ သက်သာစေတယ်။
1. Nexplanonဆိုတာ Organon ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြီး Etonogestrel ပါတယ်။ ၃ နှစ်ခံတယ်။
2. Norplant ကို ၁၉၈၃ ကတည်းက ဖင်လန်နိုင်ငံမှာစသုံးခဲ့တယ်။ Levonorgestrel (Progestin) 36 mg ပါပြီး (2.4 mm × 34 mm) အရွယ်ရှိတဲ့ Silicone capsules (၆) ခု ဖြစ်တယ်။ ၅ နှစ် ခံတယ်။ ယပ်တောင် ပုံလေးလို လှလှပပလေး ထည့်ပေးတယ်။ အပေါ်ကနေ မြင်နေရတတ်တယ်။ သေခြာစမ်းရင် သိနိုင်တယ်။ အိန္ဒိယကထုတ်တဲ့ Norplant capsules ၆ တောင့်ထဲမှာAprogestinပါတယ်။ ဝတဲ့သူတွေလဲရတယ်လို့ ပြောတယ်။ ၅ နှစ်ထားနိုင်တယ်။
3. Jadelle (Norplant II) နာမည်နဲ့ တခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိတယ်။ (2.5 mm × 43 mm) အရွယ် (စီလီကွန်) (၂) ချောင်း ထဲမှာ 75 mg Levonorgestrelပါတယ်။ ၁၉၉၆ က စသုံးတယ်။ အစက ၃ နှစ် နောက်တော့ ၅ နှစ် အာမခံတယ်။ အစနှစ်မှာ တနေ့ကို 100 µg/day နောက်၊ 40 µg/day နဲ့ 30 µg/day နှုန်းနဲ့ ၅ နှစ်ကြာထုတ်ပေးနေမယ်။
4. Implanon (Etonogestrel) ကို ဗြိတိန်မှာ ၁၉၉၉၊ ကတည်းကစသုံးတယ်။ Etonorgestrel ဟော်မုန်းပါတယ်။4cm x2mm အရွယ်ရှိတယ်။ တတောင်ဆစ် အောက်နားအရေပြားအောက်မှာထည့်လေ့ရှိတယ်။ အခုအဲဒါ Nexplanonနဲ့ အစားထိုးလိုက်ပြီ။ ခပ်ဆင်ဆင်ပါဘဲ။ ဒါပေမဲ့ ဓါတ်မှန်မှာပေါ်နိုင်တာလုပ်ထားတယ်။ Applicator ပါလို့ ထည့်ရတာလဲ လွယ်တယ်။ အရင်ဟာကို ၃ နှစ် ကျော်ရင်တော့ အသစ်နဲ့ အစားထိုးတာကောင်းတယ်။
5. Implanonကိုသာ USA မှာ ၂ဝဝ၆ ဇူလိုင်ကစပြီးလိုင်စင်ပေးထားတယ်။ Etonogestrel 68 mg ပါပြီး၊ ၃ နှစ်ခံ၊ (၁) ချောင်းထဲ ဖြစ်တယ်။ ထုံဆေးသုံးပြီးလူနာကညာသန်ဆိုရင် ဘယ်လက်ဖျံမှာတဒေါင်ဆဆစ် အထက် လက်မောင်း အတွင်းဘက် ၈-၁ဝ စင်တီမီတာနေရာမယ် ထည့်ပေးတယ်။ ၅-၁၅ မိနစ်အလုပ်သာ ဖြစ်တယ်။ ၄% လောက်မှာ သွေးခြည်ဥတာ၊ ဖေါင်းတာ၊ နီရဲတာ၊ နာနေတာ ဖြစ်တတ်တယ်။
မထည့်ခင် ကိုယ်ဝန်ရှိမနေတာသေခြာစေသင့်တယ်။ ဆီးစစ်ပါ။ ရာသီစလာတဲ့ရက်ကနေ ၅ ရက်အတွင်းလုပ်သင့်တယ်။ ကလေး ဖွါးပြီးစ၊ ကလေး ၃ ပတ်အရမှာလုပ်နိုင်တယ်။ ကလေးနို့တိုက်တာမှာ ပြဿနာမရှိစေဘူး။ နို့ထဲမှာ ဟော်မုန်း နဲနဲလေးတော့ ပါနေနိုင်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ပျက်ပြီးသူလဲချက်ချင်းထည့်နိုင်တယ်။ ထည့်ပြီး ၂၄ နာရီကစပြီးသက်ရောက်မှု ရှိမယ်။ ပြန်ထုတ်ပြီးရင် မကြာခင် ကိုယ်ဝန် ရနိုင်လာတယ်။
မွေးလမ်းကနေ ဘာမှန်းမသိဘဲသွေးဆင်းနေသူ၊ အသဲရောဂါဆိုးရှိနေသူ၊ သွေးခဲပိတ်ရောဂါရှိနေသူ၊ မျိုးဥအိမ်-အကျိတ် ရှိနေသူတွေ မသုံးသင့်ပါ။ လူကောင် သိပ်ကြီးနေသူတွေမှာကိုယ်ဝန်တားဘို့ ဆေးမနိုင် ဖြစ်တတ်တယ်။ သွေးဆင်းနေချိန်၊ အသဲရောဂါရှိနေရင်၊ သွေးခဲပိတ်ရောဂါရှိနေရင် မသုံးရဘူး။ မျိုးဥအိမ် အကျိတ် ရှိသူတွေလဲမသုံးသင့်ဘူး။ လူကောင် ဝလွန်းသူတွေအတွက်လဲကိုယ်ဝန်တားဘို့ မသေခြာလှဘူး။ ဥပမာ Body mass index ဆိုတာက 35kg/sqmetre ကျော်နေရင်။ ကိုယ်ဝန် ရှိနေရင်၊ အသဲရောဂါ ရှိနေရင်၊ အခုဒါမှမဟုတ် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ရင်သား-ကင်ဆာရှိရင်၊ (မိုင်ဂရင်း) အမူးရောဂါ ရှိရင် မသုံးသင့်ဘူး။ Rifampicin (Rifadin) and Rifabutin (Mycobutin), Phenytoin (Epanutin), Carbamazepine (Tegretol), Phenobarbital and Primidone (Mysoline) ဆေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်တယ်။ HIV အတွက်ဆေးတွေလဲပါတယ်။ St John's wort (Hypericumperforatum, Tipton's Weed, Chase-devil, Klamath weed) ခေါ်တဲ့ စိတ်ကျရောဂါ အတွက် သုံးတဲ့ တိုင်းရင်းဆေးပေးနေသူတွေ မသုံးသင့်ဘူး။
၁၉၉ဝ ကျော်မှာစပေါ်တုံးက အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ကိုယ်ဝန်တားနည်းဖြစ်လာရာကနေ ၂ဝ၁၁ အစပိုင်းရောက်တော့ ကိုယ်ဝန် ရသွားသူပေါင်း ၆ဝဝ ရှိတယ်လို့ ဗြိတိန် တီဗွီတွေမှာပြောလာတယ်။ မကြာခင်မှာဘဲ အဲလိုပြောတာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း မီဒီယာကနားလည်မှုလွဲတာပါလို့ (ဂါးဒီးယန်း) သတင်းစာကနေ ပြန်ရေးတယ်။ ၁ဝ နှစ်အတွင် ကိုယ်ဝန်ရသူပေါင်း ၅၄၈ ယောက်ရှိတယ် ဆိုတာဟာမအောင်မြင်မှုနှုန်း တနှစ်မှာ ဝ့ဝ၁၄% သာဖြစ်တယ်။ အောင်မြင်မှုနှုန်းက ၉၉့၉၈% ဖြစ်တယ်။
၂ဝဝဝ ခုကျော်နှစ်တွေထဲမှာထည့်ထားတဲ့ ဆေးချောင်းလေးကပြေးနေသလိုနေရာရွေ့တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေ ကြားလာရတယ်။ ဗြိတိန်မှာသုံးတာကို Implanon ခေါ်တယ်။ တချောင်းထဲဘဲ။ တတောင်ဆစ်အထက်နားမှာထည့်တာများတယ်။ သူ့ထဲမှာ Etonorgestrel ဟော်မုန်းပါတယ်။ ၂ဝ၁ဝ အောက်တိုဘာရောက်တော့ Implanonကိုမသုံးစေတော့ဘူး။ Nexplanon (Etonogestrel) ဆိုတာ အစားဝင်လာတယ်။ ဓါတ်မှန်ရိုက်ရင် မြင်နိုင်တဲ့ Barium ပါထည့်ပေးတာသာကွာခြားတယ်။ အရင်ဟာကို ထည့်ထားသူတွေက ၃ နှစ်ပြည့်ရင် ဆေးချောင်းသစ်ကိုသာထည့်ရမယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ဝ နှစ်တာသမိုင်းကိုဆန်းစစ်တဲ့အခါ စိတ်မသက်သာစရာတွေ တွေ့လာရတယ်။ ၆-၁-၂ဝ၁၁ လန်ဒန်ကလာတဲ့ သတင်းတပုဒ်မှာ ၃ နှစ်ခံ Implanon implant သုံးတဲ့ အမျိုးသမီး ၅ဝဝ မယ် ကိုယ်ဝန်ရခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ (တီဗွီ-စတိုရီ) တွေလည်း ပြကြတယ်။ နောက်ထပ် ဒါပေမဲ့တခုဆက်လာပါတယ် (မီဒီယာ) သမားတွေဟာ အခြေခံသင်္ချာကို နားလည်မှု လွဲနေတယ်တဲ့။ ပြောတဲ့သူက Medical statistician ဆေးပညာ-စာရင်းဇယားပညာရှင်ပါ။ ၁ဝ နှစ်အတွင်းကိုယ်ဝန် ၅၈၄ ဆိုတာဟာ Failure rate မအောင်မြင်နှုန်း ဝ့ဝ၁၄% သာဖြစ်ပါတယ်၊ Success rate အောင်ချက်က ၉၉့၉၈၆% ပါတဲ့။
UK မှာ ၁၉၉၉ တည်းကအမျိုးသမီးပေါင်း ၁့၎ သန်း Implanon ထည့်ထားကြတယ်။ ၁၆ဝ၇ က (ကွန်ပလိန့်) တက်တယ်။ ၉၉% ထိရောက်တယ်။ ညွှန်ကြားချက်လဲထုတ်ထားလိုက်တယ်။ လူနာတွေကိုသတင်းအချက်အလက် အစုံအသိပေးပါ။ အကျိုးနဲ့ အပြစ်တွေ၊ တခြားနည်းနာတွေ၊ ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ ပါစေရမယ်။ ပြဿနာပေါ်ရင် ရှင်းလင်းချက်၊ တောင်းပန်ချက်၊ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ၊ ထည့်ပေးထားသူတွေကို (ဖေါလိုအပ်) ခေါ်ယူစစ်ဆေးမှု စီစဉ်ပေးပါ၊
ရေရှည်မှာဘာဖြစ်သလဲ။ ကင်ဆာမဖြစ်တာတော့ သိထားတယ်။ တခြားဆိုတာတွေ သိပ်မသိလှသေးပါ။ ကောင်းတာက တခုခုဖြစ်ရင် ထုတ်ပြစ်လိုက်ယုံဘဲ။ ဆေးထိုးတာသူတွေနဲ့ မတူဘူး။ ဆေးသတ္တိကချက်ချင်းရပ်သွားတာ။
ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုးတွေ = ရာသီမလာတာလူတိုင်းတော့ မဟုတ်ပါ။ ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းမူး၊ အစက်အပျောက်ထွက်၊ ရင်သားတင်းနာ၊ စိတ်ကျ၊ ကိုယ်ရောင်သလိုဖြစ်မယ်။ ဝက်ခြံပိုထွက်မယ်။ လူကပိုဝလာ၊ (မဟုတ်ဘူးပြောတာလဲရှိတယ်)၊ စိတ်မူပြောင်းလဲ၊ (မဟုတ်ဘူးပြောတာလဲရှိတယ်)၊ လိင်စိတ် ပြောင်းလဲ၊ (မဟုတ်ဘူးပြောတာလဲရှိတယ်)။
ထည့်ကာစမှာသာအဖြစ်များပြီး ၃-၆ လနေရင် အများကြီးသက်သာသွားတယ်။ ဆေးချောင်းထည့်စ ပဌမနှစ်မှာ ရာသီမမှန်ဖြစ်တယ်။ ရက်မဟုတ်ဘဲသွေးဆင်းနိုင်တယ်။ ရက်ရှည်နိုင်တယ်။ ဆင်းတာလဲများနိုင်တယ်။ နောက်နှစ်ဆိုရင် အသားကျလာမယ်။ အဲလိုဖြစ်တာနည်းလာမယ်။ တချို့မှာရာသီအရောင်ပျော့မယ်။ အဆင်းနည်းမယ်။ လုံးဝမဆင်းဘဲလဲ နေမယ်။ သွေးဟာရာသီမဟုတ်ဘဲပိုးဝင်တာဖြစ်မလားမသေခြာရင် ဆရာဝန်ပြပါ။
၂ဝ-၃-၂ဝ၁၁ Guardian News and Media ကလဲ GPs ဆရာဝန်တွေ ဘယ်လိုစနစ်တကျ ထည့်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ သင်တန်းယူသင့်တယ်လို့ ရေးတယ်။ သူတို့ဆီမှာအာမခံစနစ်၊ တရားစီရင်ရေးစနစ်တွေကပိုကောင်းတာမို့ နစ်နာသူတွေ လျှော်ကြေးရနိုင်ကြလို့ ၁၁ ဦးကတင်တာမှာ ၆ ဦးအတွက် ပေါင် ၁ သိန်းပေးခဲ့ရတယ်။ ဘယ်အရာမှာမဆို လက်မှတ်ရှိသူ ဖြစ်ပေမဲ့ တတ်ကျွမ်းသူနဲ့ အတွေ့အကြူံများသူမတူကြပါ။
ကိုယ်အပူချိန် ၃၇ ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ် သို့မဟုတ် ၉၈ ဒသမ ၆ ဒီဂရီ ဖာရင်ဟိုက်ထက် ပိုရင်
အဖျားတက်ခြင်းလို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။ အဖျားတက်ခြင်းဟာ နေထိုင် မကောင်းခြင်းရဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောဂါပိုး တစ်ခုခု ဝင်နေရင် အဲဒီ ရောဂါပိုးက သွေးဖြူဥထဲက ဖျားစေတဲ့ ပစ္စည်းတချို့ ထွက်လာအောင် လှုံ့ဆော် စေတယ်။ သာမန် အအေးမိလို့ ဖျားရင် နှစ်ရက်ကနေ လေးရက်ပဲ ကြာပေမဲ့ ရေကျောက် ပေါက်ရင်တော့ ၁ဝ ရက်ကနေ ရက် ၂ဝ လောက် ကြာတတ်တယ်။
အမျိုးသမီးအများစုဟာ အသက် ၅ဝ ကျော်ရင် သွေးဆုံးပါတယ်။ အီစတြိုဂျင် ဟော်မုန်းလျော့နည်း လာတယ်။ သွေးဆုံးတာ အမျိုးသမီးတိုင်း ရှောင်လို့မရတဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ် တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရာသီဆုံး၊ စချိန်မှာချွေးပြန်၍ ပူနွေးခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အပြောင်းအလဲနဲ့ နှလုံးရောဂါ၊အရိုးပွရောဂါတို့ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ချွေးပြန်၍ ပူနွေးခြင်းဆိုရာမှာ ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်မှာ အပူလှိုင်းဖြစ်နေပြီး ညဘက်ချွေးထွက်တတ်ကာ သွေးကြော ကျယ်လာတဲ့အတွက် သွေးဖိအားထိန်းညှိ ဆေးဝါး ဗိုက်တာမင် အားဆေး၊ အိပ်ဆေးကျွေးရင် သက်သာမယ်။ ဒီဝေဒနာကို အသက် ၄၅ နှစ်မှ ၅၂ နှစ်အတွင်း အမျိုးသမီးတွေ တွေ့ကြုံရစမြဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ ရာသီဆုံးချိန်မှာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ စိတ်မအီမသာဖြစ်ခြင်း၊ စိတ်မတည်ငြိမ်ခြင်း၊ မှတ်ဥာဏ်အားနည်းခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်ကျခြင်းနဲ့ မောပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေကို တွဲလျက်တွေ့ရပြီး ဟော်မုန်းနဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြောင့် ဖြစ်ရတာမို့ အိပ်မပျော်တတ်ကြဘူး။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲမှုအနေနဲ့ ရင်သားတွေ သေးငယ်သွားပြီး အဆီပြင်တစ်သျှူးများ ပြန်စုပ်ယူနိုင်တဲ့အတွက် ပုံသဏ္ဌာန်ပါ ပြောင်းလာတယ်။ ဆီးကျိတ် မကြာခဏရောင်ပြီး ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်တာ တွေ့ရတယ်။
သွေးမဆုံးခင် အီစတြိုဂျင်ဟော်မုန်းဟာ နှလုံးရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးတယ်။ သွေးဆုံးပြီးချိန် နောက်ပိုင်းမှာ အမျိုးသားများနည်းတူ အမျိုးသမီးတွေဟာ နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေ များလာတယ်။ သွေးဆုံးချိန် နောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ရိုးထုထည်ဆုံးရှုံးမှုဟာ လျင်မြန်လာတယ်။ အရိုးအဆစ် တောင့်တင်းခြင်း၊ ကိုက်ခဲခြင်းတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ အဓိက အီစတြိုဂျင်ချို့တဲ့မှုကြောင့် အကြောတက်တယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးက ကိုယ်အလေးချိန်တက်ခြင်း၊ ဝခြင်း၊ မူးဝေအော့အန်ခြင်း၊ သွေးခဲခြင်း အနည်းငယ် မြင့်မားပြီး ရင်းသားကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတယ်။ ၂ နှစ်မှ ၅ နှစ်အထိ ကုရင် ကောင်းကျိုးထက် ဆိုးကျိုးကပိုများတယ်။ သွေးဆုံးချိန်မှာ အမျိုးသမီးများမှာ ဖြစ်ပွားတတ်တဲ့ ရောဂါဟာ အီစတြိုဂျင်ခေါ် မဟော်မုန်း ပမာဏလျော့နည်းလာလို့ ဖြစ်ပါ တယ်။ ဟော်မုန်း ဆုံးရှုံးမှု ဖြည့်ဆည်းပေးမယ့် အစာတွေ စားသောက်ဖို့လိုပါတယ်။ အစာကို ညီညွတ်မျှတအောင် စားတတ်ဖို့ အရေးကြီးတယ်။ အဲဒီလိုညီညွတ်မျှ တအောင် စားပေးခြင်းဖြင့် စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း၊ ချွေးထွက်လွယ်ခြင်းနဲ့ ပူနွေးနေခြင်းကို သက်သာစေပါတယ်။
ပဲပိစပ်၊ ပဲပိစပ်ကထုတ်တဲ့ အစားအစာ၊ ပဲနီလေး၊ ပဲခြောက်၊ မက်မန်းသီး၊ ပန်းသီး၊ ငှက်ပျောသီး၊ ချယ်ရီသီး၊ သင်္ဘောသီး၊ သလဲသီး၊ ယိုနဲ့သစ်သီးတွေစားရမယ်။ နှံစားသီးနှံ၊ မုန်လာဥနီ၊ ပန်းဂေါ်ဖီ၊ စမုန်နက်နဲ့ ပင်လယ်ရေမှော်တွေကို စားသင့်ပါတယ်။ ကစီဓာတ်ပါတဲ့ အသီးအရွက်နဲ့သစ်သီး၊ နှံစားသီးနှံ၊ ပဲကို အခြေခံတဲ့ အစားအစာတွေ မှန်မှန်စားသုံးပြီး သကြားဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာကို လျှော့စားတာဟာ သွေးထဲကဂလူးကို့ ပမာဏကို ထိန်းညှိပေးပြီး စိတ်ဖိစီးမှုနည်းစေတယ်။ မြေပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ စတဲ့ မပြည့်ဝဆီတွေကိုသာ စားသုံးရမယ်။ ပင်လယ်ငါးကို စားသုံးပေးရပါမယ်။
Uterine Fibroid သားအိမ်အလုံး
အသက်က ၃၉ ရှိပါပြီ။ တခါမှကိုယ်ဝန်မဆောင်ဘူးပါ Fibroid က ညာဘက်တွင်ရှိပါသည်။
Leiomyoma နဲ့ Myoma လို့ပါခေါ်တယ်။ အရွယ်အစားငယ်သေးတာကို Uterine cyst သားအိမ်ရေအိတ် လို့လဲခေါ်တယ်။ ကင်ဆာမဟုတ်တဲ့ အလုံး-အကျိတ်ဖြစ်တယ်။ ကလေးမရတာ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ တလုံးတည်းရော အများကြီးပါ ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ အရွယ်အစားလဲ သေးသေးလေးကနေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသလား အောက်မေ့ရလောက်အောင် ကြီးနိုင်တယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အသက် ၅ဝ ကျော်လာရင် ၇ဝ-၈ဝ% ရှိကြတယ်။
Submucosal fibroids သားအိမ်အတွင်းဆုံးလွာကနေဖြစ်တာဆိုရင် ရာသီဆင်းတာများမယ်။ ဒီအကြောင်း သပ်သပ်ရေးထားပါတယ်။ Subserosal fibroids ဆိုတာက သားအိမ်အပြင်ဘက်ပိုင်းမှာဖြစ်တာ။ ရာသီပုံမှန်သာဖြစ်တယ်။ အထဲမှာ ကိုယ်ဝန်ယူလဲ စိုးရိမ်စရာနည်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့ကဆီးအိမ်၊ အောက်က အစာဟောင်းအိမ်တွေအပေါ် ဖိအား သက်ရောက်တာ ခံရနိုင်တယ်။
(၁) ဖိအားသက်ရောက်ခြင်း၊ တချို့မှာ အထဲမှာ ရှိနေပေမဲ့ ရှိလို့ရှိမှန်းမသိဘူး။ တချို့မှာ အလုံးကနေ ဖိနေလို့ ခံစားရတာတွေ ရှိနိုင်တယ်။ ဆီးအိမ်ကို ဖိနေရင် ဆီးခဏခဏ သွားချင်နေမယ်။ အစာဟောင်းအိမ်ကို ဖိနေရင် ဝမ်းချုပ်တာ၊ အဲဒီနေရာက နာတာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ခါးနာနိုင်တယ်။ သိပ်ကြီးလာရင် အစာအိမ်ကိုဖိမယ်။
(၂) ရာသီမမှန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ လူတိုင်းမဟုတ်ပါ။ အလုံးက သားအိမ်ရဲ့ အတွင်းဆုံး အလွာမှာ ကပ်နေလို့ အတွင်းဆုံး မျက်နှာပြင်ဧရိယာ ကျယ်နေရင် ရာသီဆင်းစရာ နေရာ ပိုကျယ်နေလို့ ရာသီဆင်းတာ များမယ်။ အလုံးက အပြင်နေရာမှာဆိုရင် ကြီးပေ-များပေမဲ့ ရာသီကပုံမှန်ဖြစ်မယ်။
Endometriosis သားအိမ်ရောဂါတခုနဲ့ ခွဲခြားရမယ်။
ရာသီလာချိန်မျာ သူများထက်ပိုနာသူတွေ ဒီရောဂါ ၂ ခုထဲက တခုရှိနေနိုင်တယ်။ Endometriosis ဆိုတာ သားအိမ်ရဲ့ အတွင်းဆုံးအလွှာက (တစ်ရှူး) တွေ တခြားနေရာတွေမှာ ရောက်နေတာကို ခေါ်တယ်။ ပုံထဲမှာ သားအိမ် အပြင်ဘက်မှာ နဲ့ ဆီးအိမ်မှာ ရောက်နေတာဖြစ်တယ်။
ဆရာဝန်တွေ မသိကြပါ။ (အီစထိုဂျင်) နဲ့ (ပရိုဂျက်စတီရုန်း) ဟော်မုန်းတွေကိုဘဲ ထင်ကြေးပေးတယ်။ အပျိုဖြစ်စောသူတွေ အဖြစ်များတယ်။ ကျွန်တော့် ကိုယ်တွေလေ့လာမှုမှာ အပျိုကြီးတွေ၊ အိမ်ထောင်ကျပေမဲ့ ကလေး မရသေးသူတွေမှာ ပိုဖြစ်တာကို အမေရိကန် ဆရာဝန်တွေက ထောက်ပြမထားတာ တွေ့ရတယ်။
- Intramural fibroids အများဆုံးတွေ့ရတယ်။ သားအိမ်နံရံထဲမှာဖြစ်တယ်။ ကြီးတာများတယ်။
- Subserosal fibroids သားအိမ်အဖုံးလွှာ အောက်နားမှာ ဖြစ်တယ်။ ကြီးလာရင် ဘေးအင်္ဂါတွေကိုဖိတာ ခံစားရမယ်။ ရာသီကို မများစေဘူး။
- Submucosal fibroids သားအိမ်အတွင်းဆုံးလွှာ အောက်နားမှာဖြစ်တယ်။ ရာသီများမယ်။
- Pedunculated fibroids သားအိမ်အပြင်ဘက်မှာ အညှာလိုရှိနေတာမျိုး။
- အသက် ၃ဝ-၄ဝ ကြားအဖြစ်များတယ်။
- အသားမဲတွေက အဖြူမတွေထက်အဖြစ်များတယ်။
- အသက်ငယ်တုံးဖြစ်ရင် အလုံးကြီးလာတာမြန်တယ်။
- မိသားစု-ဆွေမျိုးတဲမှာ တယောက်မက ဖြစ်တတ်တယ်။
ဒီရောဂါရှိနေပေမဲ့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တာကို သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ ဒါပေမဲ့ သတိထားစရာတွေရှိတယ်။ ကိုယ်ဝန်ယူမလား၊ မွေးလမ်းကနေမွေးလို့ ရသလား၊ ကိုယ်ဝန်မဆောင်ခင် ခွဲမလား၊ တယောက်နဲ့တယောက်မှာ အခြေအနေခြင်း မတူပါ။
ဗိုက်ကိုလက်နဲ့ စမ်းရင် တချို့အလုံးကို စမ်းလို့ရတယ်။ Ultrasound ရိုက်ရင်သေခြာတယ်။
နာရင် အနာသက်သာဆေးပေးမယ်။ Ibuprofen ဒါမှမဟုတ် Naproxen ဆေးသောက်ပါ။ ကိုယ်ဝန်တားဆေး တချို့ကိုပေးနိုင်တယ်။ ရာသီဆင်းတာနည်းစေမယ်။ နာတာသက်သာစေမယ်။ Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonists ဆေးပေးရင် ရာသီမလာဘဲနေမယ်။ ခံစားရတာတွေ သက်သာစေမယ်။ အလုံးလဲ သေးနိုင်တယ်။ Estrogen နည်းစေလို့ အရိုးအားနည်းတာ၊ မျက်နှာနီမြန်းတာ၊ (ဗဂျိုင်းနား) ခြောက်နေတာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်။ ဆေးဖြတ်ရင် ပြန်ကြီးလာမှာမို့ မခွဲခင်ဆေးပေးနည်း အနေနဲ့သာ သုံးတယ်။
Embolization (အင်ဘော်လိုက်ဇေးရှင်း) နည်း
အနည်းအကျဉ်းနဲ့ အတော်အသင့် ခံစားရသူတွေကို လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ သားအိမ်သွေးလွှတ်ကြောထဲ ပိုက်ကလေး သွင်းပြီး Plastic or Gelatin သေးသေးလေးတွေ ထိုးပေးတယ်။
Myomectomy အများဆုံးသုံးနဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်တယ်။ အလုံးကြီးရင် ဗိုက်ခွဲပြီး ထုတ်တယ်။ သေးရင် ကရိယာနဲ့ ထုတ်နိုင်တယ်။ တချို့ပြန်ဖြစ်တယ်။ ခွဲစိတ်လို့ ကလေးမရတာ မဖြစ်တတ်ပါ။ အသက်အရ သားအိမ်ပါ ထုတ်ပြစ်နိုင်တယ်။
Ultrasound (အာလ်ထွာဆောင်း) ဆိုတာ အသံလှိုင်းထုတ်ပေးတဲ့ စက်ပါဘဲ။ လူ့နား မကြားနိုင်လောက်အောင် အသံလှိုင်းက မြင့်တယ်။ လူတယောက်နဲ့ တယောက် အသံတခုကို ကြားနိုင်စွမ်း နဲနဲစီကွဲပေမဲ့ ပျမ်းမျှ 20,000 Hz ကို ကြားနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ ဆေးကုနည်းအနေနဲ့ သုံးတာကို High-Intensity Focused Ultrasound (HIFU) ခေါ်တယ်။ ရောဂါရှာဖွေတာအတွက် 1 to5MHz သုံးပြီး၊ Therapeutic ultrasound ကုသတာအတွက် 0.7 to 3.3 MHz သုံးတယ်။ Lithotripsy ကျောက်ကပ်-ကျောက်၊ သည်းခြေ-ကျောက်၊ Targeted ultrasound drug delivery ဆေးထည့်ပေးခြင်း၊ Ultrasound hemostasis သွေးတိတ်စေခြင်း၊ Ultrasound assisted thrombolysis သွေးခဲဖျက်ပေးခြင်း တွေအတွက် သုံးလေ့ရှိတယ်။ Fibroids ကိုလဲသုံးနိုင်တယ်။ ရေရှည်အကျိုး စမ်းနေတုံးဘဲ။ မသေခြာလို့ ကိုယ်ဝန် လိုချင်သေးသူတွေကို မသုံးဘူး။
Anemia သွေးအားနည်းနိုင်တယ်။ ရာသီဆင်းတာ သူများထက်များလို့ ကြာတော့ သွေးအာနည်းလာမယ်။ အဆိုးကြီး မဟုတ်ပါ။ သားအိမ်အလုံးရှိလို့ ရာသီဆင်းတာ များသူတွေမှာ သွေးအားနည်းလာမယ်။ လူက မောပန်းပြီး ဖြူဖတ်ဖြူရော် ဖြစ်နေမယ်။ အသက်ရှူမဝဖြစ်မယ်။ အသား-ငါး၊ စိုစိမ်းတဲ့ အသီးအရွက်တွေ စားပေးသင့်တယ်။ သံဓါတ်အားဆေး အမြဲသောက်နေရမယ်။
ပုံမှန် ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်နေသူတွေမှာ သားအိမ်အလုံး အဖြစ်နည်းတယ်။ လူကဝနေရင်လဲ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်။
1. သမီး ကို adenomysis ဖြစ်နေတယ်ပြောတယ်။ laparoscopic လုပ်ရမယ်ပြောတယ်။ လုပ်ပြီးရင် ကလေး ရနိုင်မှားလား။ သမီး အသက် က ၃၂ ပါ။့့ မှာ နေတာပါ။့့ 15,000 လောက် ကုန်မယ်ပြောတယ်။ ရန်ကုန် ပြန်လုပ်ရင် ကောင်းမလားဆရာ။ ကျေး ဇူး။
2. ဆရာ Email မသုံးတာ ကြာလို့ ခဏခဏ စာတွေရောက်သွားမိရင် ခွင့်လွှတ်ပါဆရာ။ ကျွန်မ အသက်က ၃၅ နှစ်ပါဆရာ။ မြန်မာနိင်ငံမှာနေပါတယ်။ သမီးလေးတယောက်ရှိပါတယ်။ ကလေးထပ်ယူဖို့ သားအိမ်ကို စစ်တော့ သားအိမ်မှာ (Adenomyosis) ဆိုတဲ့ ရောဂါဖြစ်နေပါတယ်တဲ့။ ကလေးယူရင် မြန်မြန်ယူပါတဲ့။ ကျွန်မ မျက်နှာမှာလဲ တင်းတိပ်တွေအများကြီးထွက်လာပါတယ်ဆရာ။ ကျေးဇူးပြု၍ အများဖတ်နိင်အောင်လို့ Facebook မှာတင်ပေးပါဆရာ။ ကလေးထပ်ယူဖို့ အန္တရာယ်များရှိပါသလားဆရာ။ ဆရာရှိလို့ ကျွန်မတို့မြန်မာနိင်ငံမှာ ဆေးပညာဗဟုသုတတွေရပါတယ်ဆရာ ကျေးဇူးကြီးလှပါတယ်ဆရာ။
3. ပြီးခဲ့တဲ့ နိုဝင်ဘာက့့ မှာ အလုပ်လုပ်နေရင်း ရုတ်တရက်ဗိုက်အောင့်လို့ ဆေးရုံရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Severe Adenomypsos လို့ပြောပါတယ်။ Medroxyprogesterone Acet* 150Mg/3Ml I nj ကို ၃ လတခါ ထိုးခိုင်းပါတယ်။ ထိုးရင်ဗိုက်အောင့်တာသက်သာမယ်၊ ထပ်ပြီးမကြီးလာဘူးလို့ပြောပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ တားဆေးလို့ သိရပါတယ်။ ခု ၂ ခါ ထိုးပြီးပါပြီ။ ထိုးပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့ ခုထိနေ့စဉ်ရာသီလာပါတယ်။ ရန်ကုန်ပြန်တော့ ဒေါက်တာ့့ နဲ့ ပြဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လူနာကအရမ်းများတော့ သေချာမပြောနဲ့ခဲ့ပါဘူး။ ဘာမှမဖြစ်ဘူးသေးသေးလေးလို့ ပြောပါတယ်။ သမီးသိချင်တာ သမီးကအပျိုပါ အသက် ၃ဝ ပါ။ သမီးခုလိုဆေးထိုးနေလို့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ရင် ကလေး ရနိုင်မဲ့ အခွင့်အရေးမရမှာ စိုးရိမ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီးရှင်းပြပေးပါနော်။ ဘာဆက် လုပ်သင့်တယ် ဆိုတာလေးလည်း အကြံပြုပေးပါနော်။
သားအိမ်မှာ အလွှာ ၃ ခုရှိတယ်။ အတွင်းဆုံးက အရေးကြီးတယ်။ ရာသီလာတာအဲဒီကဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ကပ်တာလဲ အဲဒီမှာဘဲ။ အတွင်းဆုံးအလွှာကနေ အလယ်လွှာဖြစ်တဲ့ ကြွက်သားလွှာထဲကို တိုးဝင်နေတာကို ‘အဒီနိုမိုင်ယိုးဆစ်’ လို့ ခေါ်တယ်။
ရာသီလာတိုင်းနာမယ်။ ဗိုက်အောက်ပိုင်းနာမယ်။ လေတက်မယ်။ ဆင်းတာလဲများမယ်။ တနေရာလောက်မှာသာ အဲလိုဖြစ်တာနဲ့ သားအိမ်တခုလုံးမှာဖြစ်တာလို့ရှိတယ်။ ခံရတာမသက်သာလှပေမဲ့ ကင်ဆာ မဟုတ်ပါ။ တချို့မှာ ရောဂါရှိနေပေမဲ့ မသိသလိုနေနိုင်သေးတယ်။
Adenomyosis သားအိမ်အတွင်းဆုံးလွှာရောဂါ အဖြစ်မနည်းပါ။ အသက်အရွယ် လူလတ်ပိုင်းမှာဖြစ်ကြတာများတယ်။ ကလေးရဘူးသူတွေမျာပိုဖြစ်တယ်။ ဘာလို့ဖြစ်သလဲ တိတိကျကျတော့မသိသေးပါ။ Estrogen, Progesterone, Prolactin နဲ့ Follicle stimulating hormone ခေါ်တဲ့ ဟော်မုန်းတွေနဲ့ဆိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
တချို့မျာ သားအိမ်ထုတ်ပြစ်ပြီး စစ်ဆေးမှသာရောဂါကိုအတိအကျသိနိုင်တယ်။ MRI နဲ့ Transvaginal ultrasound မွေးလမ်းကနေရိုက်တဲ့ ‘အာလ်ထွာဆောင်း’ နဲ့လဲသိနိုင်လာပြီ။ လက်နဲ့စမ်းသပ်ရင် သားအိမ်က ပုံမှန်ထက်ကြီးနေမယ်။ နာမယ်။ Sonohysterography လဲဆက်လုပ်ရတယ်။ ဆားရည်ထိုးထည့်ပြီးမှ ‘အာလ်ထွာဆောင်း’ ရိုက်တာဖြစ်တယ်။ Uterine Fibroids သားအိမ်အကျိတ် နဲ့ မှားနိုင်တယ်။
ကုသဘို့ဆိုတာ ခံစားနေရတာတွေ သက်သာအောင်လုပ်ပေးမယ်။
• ရာသီလာလို့နာတာသက်သာအောင်လုပ်တဲ့ဆေးနည်းတွေဖြစ်တယ်။ (NSAIDs) ဆေးတွေပေးတာများတယ်။ ဥပမာ Ibuprofen ပေးမယ်။ အပူကပ်ပေးတာလုပ်မယ်။
• Oral contraceptives ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေသုံးနိုင်တယ်။ ဟော်မုန်း ၂ မျိုးတွဲနဲ့ Progestin-only တမျိုးထဲပါတာတွေသုံးတယ်။
• Transdermal patches ဟော်မုန်းပါဆေးကပ်ခွါလဲသုံးတယ်။ Progesterone-releasing intrauterine devices သားအိမ်ထဲထည့်ရပြီး ဟော်မုန်းထုပေးတာမျိုးလဲသုံးတယ်။
• Danazol ခေါ်တဲ့ Gonadotropin-releasing hormone agonist ဟော်မုန်းဆန့်ကျင်ဆေးလဲသုံးတယ်။ ရာသီမလာဘဲ သွေးဆုံးစေအောင်လုပ်ပေးနည်းတမျိုးဖြစ်တယ်။ သွေးဆုံးရင် ပျောက်ကင်းနိုင်တယ်။
• ကလေးယူဘို့ ခက်တယ်။ သန္ဓေလာကပ်ရမဲ့အလွှာက အခြေအနေမပေးလို့ဖြစ်တယ်။
• ကလေးယူချင်သူဆိုရင် ဖြစ်နေတဲ့နေရာ၊ အရွယ်အစားကိုကြည့်ပြီး ခွဲစိတ်တာလုပ်နိုင်တယ်။ Endometrial ablation နည်း၊ Laparoscopic myometrial electrocoagulation နည်း နဲ့ Adenomyoma excision နည်းတွေ ရှိတယ်။ Uterine artery embolization သားအိမ်သွားသွေးကြောပိတ်နည်းက ခွဲစိတ်ရတာမဟုတ်ပါ။
• ကလေးမယူတော့သူတွေကို Hysterectomy သားအိမ်ထုတ်ပေးမယ်။
• Prognosis အလားအလာ - ကင်ဆာမဖြစ်စေပါ။ သွေးဆုံးရင် ခံစားနေရတာတွေ ကောင်းသွားမယ်။ တွဲရှိနေ-မနေတော့ စစ်ရမယ်။ Leiomyoma (Fibroid) နဲ့ Endometriosis သားအိမ်ရောဂါတွေလဲ အတူတွဲနေ-မနေ စစ်ရတယ်။
၂၀၀၃ ခုနှစ်အတွင်းက အာရွန်ရာလ်စတန်ဆိုသည် အမျိုးသားတစ်ဦးသည် နက်ရှိုင်းမတ်စောက်လှသည့် Blue John Canyon လျှိုချောက်ကြီးဆီသို့ တောင်တက်ခရီးထွက်ရန် ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။
ကျောက်နံရံပေါ်သို့ တွယ်တက်နေစဉ် ပဲ့ကျလာသည့် ကျောက်တုံးကြီးတစ်တုံးက သူ၏ညာလက်ဖျံကိုကြိတ်ချေလျက်သားအနေအထားဖြင့် အောက်သို့ ဆက်မကျဘဲ နံရံပက်ကြားအက်ထဲတွင် သပ်ရိုက်သကဲ့သို့ ညပ်သွားခဲ့သည်။
ရာလ်စတန်သည် သူ၏တောင်တက်ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူ့ကိုမျှ အသိပေးထားခြင်း မရှိရာ၊ ကယ်ဆယ်မည့်သူ ရောက်လာမည်မဟုတ်ကြောင်း ကိုလည်း သိရှိခဲ့သည်။ မိမိကိုယ်ကို သေလူအဖြစ် မှတ်ယူကာ ရာလ်စတန်သည် ကျောက်တုံးကြီးအောက်မှ မိမိလက်ပြန်လည် ကျွတ်ထွက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ရေကိုချွေတာသောက်နေရင်း တစ်ဖက်တွင်လည်း ကျောက်တုံးကြီးကိုဖယ်ရှားရန် ကြိုးပမ်းရင်းဖြင့် ငါးရက်ခန့် အကြာတွင် ရေအနည်းငယ်သာကျန်ရှိတော့သည်။ နောက်ဆုံး ရေပြတ်လပ်သွား သည့်အချိန်တွင် မိမိ၏ ကျဉ်ငယ်ရေကို ပြန်သောက်ခဲ့ရသည်။
ငါးရက်ကျော်ပြီးသည့်နောက်တွင် ရာလ်စတန်က မိမိလွတ်မြောက်ရန်အတွက် ညပ်နေသည့် ညာလက်ကို ဖြတ်ပစ်မှဖြစ်မည်ဟု နားလည်လာခဲ့သည်။ ဦးစွာ ကျောက်တုံးကြား၌ ညပ်နေသည့်လက်ကို လှန်ချိုးခဲ့ရာ လက်ဖျံရိုးနှင့်တကွ တံတောင်ဆစ်ရိုးပါ ကျိုးသွားခဲ့သည်။
ယင်းနောက် မိမိတွင်ပါလာသော စွယ်စုံသုံး ကိရိယာမှ ဓားတုံးတုံးတစ်လက်ဖြင့် ကျိုးသွားသော လက်နေရာတစ်ဝိုက်ရှိ နူးညံ့သော အသားစများကို လှီးဖြတ်ခဲ့သည်။ အရွတ်များကဲ့သို့ မာကျောသည့် အရာများကိုမူ ပလက်ယာဖြင့် ကိုက်ဖြတ်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း ငါးရက်နှင့် ၇ နာရီ (၁၂၇ နာရီ) ကြာမြင့်ပြီးနောက် ကျောက်တုံးကြီးအောက်မှ လက်ကိုဖြတ်၍ လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။ ယင်းနောက်တွင် ၎င်းအနေဖြင့် ၆၅ ပေကျော်မြင့်သော မတ်စောက်လှသည့် တောင်နံရံကို တွယ်၍ပြန်ဆင်းရပြန်သည်။
နောက်ဆုံး ချောက်နက်ကြီးအပြင်ဘက်သို့ ရောက်ရှိသွားပြီးနောက်တွင် ပျော်ပွဲစားထွက်လာသော မိသားစုတစ်စုနှင့်တွေ့ရာမှ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ထံသို့ အကြောင်းကြားနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆုံးသတ်တွင် ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့က ရာလ်စတန်အား ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် လာရောက်သယ်ဆောင်သွားခဲ့သည်။
၂၀၀၄ ခုနှစ် တွင် ရာလ်စတန်ကိုယ်တိုင်ရေးသားသည့် BetweenaRock andaHard Place စာအုပ် ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ တွင် သူ၏အကြောင်း ရိုက်ကူးထားသည့် 127 hours ရုပ်ရှင်ကြောင့် သူတက်ခဲ့သည့် Blue John Canyon ကြီးသည်လည်း နာမည်ကြီးသွားခဲ့သည်။
၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင် မွေးဖွားသူ ဖြစ်ရာ ယခုအခါတွင် ရာလ်စတန်အနေဖြင့် ၂၀၁၄ တွင် အသက် ၃၉ နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်သည်။